» पूर्वी चितवनको रत्ननगर अस्पतालमा तोडफोड, सुरक्षागार्डमाथि कुटपिट
पूर्वी चितवनको रत्ननगर अस्पतालमा तोडफोड, सुरक्षागार्डमाथि कुटपिट
५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ११:३२ प्रकाशित
चितवन – पूर्वी चितवनको रत्ननगरस्थित बकुलहर अस्पतालमा तोडफोड भएको छ । मध्यरातमा एक समूहले अस्पतालमा तोडफोड गरेको हो ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. विश्ववन्धु बगालेका अनुसार ५-६ जनाको समूहमा आएकाहरुले अस्पतालमा तोड्फोड गरेका हुन् । उनीहरुले अस्पतालको आकस्मिक कक्षको ढोकाको सिसा फुटाएका छन् । अस्पतालका सुरक्षा गार्ड एकबहादुर थापामगरमाथि कुटपिट समेत भएको उनले बताए ।
अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि दुर्व्यवहार तथा हातपातको प्रयास भएको उनले बताए । तोडफोड गर्ने तथा कुटपिट गर्ने समूहको पहिचान भएको छैन । उनीहरु फरार छन् । तोडफोड र कुटपिटमा संलग्नहरुको सिसिटिभी फुटेज छ । उनीहरुले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल नियन्त्रणमै छ ।
घटनाबारे इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीलाई जानकारी गराइएको मेसु डा. बगालेले जानकारी दिए । यस्ता घटनाले अस्पतालका चिकित्सक, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल घट्दै भन्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरेका छन् ।